Uummatni Oromoo Maal Barbaada Mootummaa Oromiyaa immoo Itoophiyaa? |
Home Afaan Oromoo Uummatni Oromoo Maal Barbaada Mootummaa Oromiyaa immoo Itoophiyaa?
Damee Boruu: Hagayya 9, 2020
Uummatni Oromoo gargaarsa eenyuu malee Mootummaa Impaayeera Itoophiyaa cabsuu gad gonbsuuf humnaa fi dandeetti gahaa qaba. Daboo orma biraa kan gaafatuu fi yookan kadhatuuf sababni tokko illee hin jiru. Rakkinni qabsoo keenyaa galma isaa gahuu dhabuu dha. Dhumni Qabsoo Bilisuummmaa Uummata Oromoo galama isaa kan gahu yoo Uummatni Oromoo motummaa mataa isaa dhaabbate qofaa taha. Abarsa humna Habashaa tokko jalaa baane humna Habashaa biraa jala galuu Waaqqayyo nu haa olshu. Uummatni keenya humnaa fi dandeetti guddaa qabuu miila isaa lamaan gadi dhaabbatee mootummaa mataa isaa ijaarrachuu kan isa dhorkuu danda’u humni tokko illee biyya lafaa kana irra hin jiru. Garuu nuttu of dandeenyee Mootummaa mataa keenyaa dhaabbachuuf hir’ina qor-qalbi of irratti amantii waan dhabaa jirru natti fakkaata.
Yaada burqisiisuun akka yaroo lammaffaa afaanfajjii fi dogongora gochaa keessa dabarree akka nutti hin deebine gochuu nu gargaara. Yaadni madisiisaa jiru qabsoo bilisummaa oromoo akka qaramaa deemuuf malee nama biraa qeequu fi yookaan xiqqeessuuf akka hin taane naaf hubatamuu qaba. Afaanffajjii qabsoo bilisummaa keessatti uumamaa dhufe yaroon kaasu gochu kun namoota tokko tokkoo addatti kan ilaalu illee yoo tahe an namoota sanaan komachuuf miti. Yaroo adda addaatti namoota maqaa dha’ee akka waan hojjechaa jiran irraa akka dhaabbatan(warra aangoo irra jiran dabalatee) gaafachuuf leeya’ee hin beeku.Yaroo hundaa yaada qulqulluu kan dantaa mataa koo hin ilaallee fi kan qabsoo bilisummaa Uummata Oromoof utubaa tahee yoo natti mul’ate dhiyeessuun hawwii koo keessaa isaa duraa ti.
Dhiigni Qaroo fi qaqalli ilmaan Oromoo ija keenya fuula duratti wagga dheeraaf dhangala’aa jira. Haalli kun bakka tokkotti gudunfamuu qaba. Bara baraan dhiiga kumaataan aarsaa gochaa amma yoom itti qabsoon keenya xumura malee hafa? Yaaddoon koo inni guddaan namoota Oromoo keessaa warra suusii fi jaallalli Impaayeera Itoophiyaa warra nafxanyaa caalaa isaan maraachutu jira. Warri kun rakkinni isaan qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoo keessatti uuman kan warra nafaxyaa caala. Warra nafxanyaa uummatni keenya diina tahuu isaanii hubatee fagooti of irraa ittisa. Warra kun garuu mooraa qabsoo keessa waan jiraniif of irraa faccisuun rakkisaa dha. Akka isaan rakkina guddaa nutti hin fidneef Mootummaa Yaroo Naannoo Oromiyaa ijaarana yoo jennee waan afurri isaanii keessaa bahu natti hin fakkaatu. Mootummaan Naannoo Oromiyaa daangaa beekamtii qabuu fi mataa isaan of bulchuun Seera biyyichaan kennameef jira. Seera kana qabanne hojiin akka Uummatni Oromoo ofiin of bulchuu gochuu taha hojiin keenya.
Namni muka muru yoo kan isatti jigu tahe sababni muruuf hin jiru. Mootummaan Impaayeera Itoophiyaa yoo jige dhimmi Uummata Oromoo irratti jiguuf tokko illee hin jiru. Namoonni abjuu Impaayeera Itoophiyaa dhaalu qaban maal akka argachuuf deeman beekuu qabu. Inni duraa maqaa mootummaa Impaayeera Itoophiyaa haaromsuun qabsoo Uummata Oromoo dongorsanii garbummaa bara baraa akka itti fufu gochuu dha. Inni lammaffaa kan daalamuu yoo jiraate hiyuma, beelaa, liqii bara dheeraa baasuu fi nageenya bora’aa keessa jiraachuu akka tahe beeku qabu. Waan hunda caalaa immoo dhumni isaaninis akkuma obbolaa isaanii har’a argaa jiruu ajjeefamuu fi mana hidhaa keessatti gidirfamuu akka tahe dagachuu hin qaban. Warra akka Leencoo Lataa immoo qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoo keessa dhokatanii qabsoon bilisummaa gara fuula duraa akka hin tarkaafannee gufuu balbala gubaa tahanii jiran har’a namni hubachuu hin daneenye jira jedhee hin yaadu.
Waraanni Bilisummaa Oromoo fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo humni rooroo Uummata Oromoo irra ittisuu danda’an akka tahan firaafis tahee diinaaf haala qabatamaan agrsiisanii jiru.Yaaroo ijaarsonni Oromoo warri akka ABO fi KFO karaa nagaa qabsoo goona jedhan gaheen isaanii mana hidhaa fi ajjeefamuu tahee jiru kana keessa wabiin Qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoo gatiitti WBO fi QBO gubatti jigee jira. Mootummaa Gabroofataa (Colonial Empire state) karaa nagaa qabsoo godhanii bilisa bahuun akka hin danda’amne irra deebinee dubbachaa baane. Naannoon Habashaa hidhatee har’a illee yaroo hiriira bahu harka qulaa isaa illee hiriira bahu hin danda’u. Qabsawwaan Oromoo tahan warra ilmaan Oromoo irraa qawwee hiksisaa turan yaroon yaadadhu na balakamsiisuu gaha. Mee ilaala warri sun har’a isa jiran. Mootummaan kun hooggantoota ABO hidhuu fi ajjeessuu bira darbee diiguu shira xaxaa jiru argaa jirra. Mootummaa Habashaa wajjin wiliin waliif galuu dandeenyu tokko hin jiru.
WBO fi QBO yoo jabeessanii itti muddan Mootummaa Konoonel yaroo gabaabaa keessatti gonbisuu danda’u. Aangoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa qabachuuf yoo qophii hin qabaanne ammas maqaa Mootummaa Itoophiyaan Damaqee Mokonnon yookaan Biraanuu Nagaa yookaas Abiyi biraatu aangoo mootummaa qabata. Qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoof furmaata hin tahu. Rakkinni Impaayeera Itoophiyaa akka furamu barbaachisaa yoo tahe impaayerri naannoo amma uumamee jiru kanatti caccabuu qaba. Mootummaan Naannoon Tigray warra hafaniif fakkeenya bareedaa taha jira. Waggaa lamaaf erga mataa isaaniin of bulchanii booda filmaatan Mootummaa Uummata Tigray ijaarachuuf deemu. Sana booda maqaa Uummata Tigrayiin uummata olla isaanii wajiin walii galtee uumuu danda’u.
Waan hundaa dura qabsoo haddooftuu goone Mootummaa Nafxanyoota Konoonel Abiyiin dursamu of irraa haa cabsinu. Sana boodaa Mootummaa Yaroo Naannoo Oromiya kan WBO, QBO, ABO, KFO fi kan hafan illee keessa qooda qaban haa dhaabannu. Mootummaa kana keessa kan qooda fudhachuu hin dandeenye akka ijaarsatti OPDO fi PP qofa. Warri kun lukkee diinaa waan tahaniif Naanno Amhaaraa Deemanii yoo barbdaadan Mootummaa Itoophiyaa Bahir Darii irratti haa dhabatan. Warri suusii fi jaalalli Itoophiyaa isaan rakkisuu illee isaan wajjin deemuu danda’u. Waggaa lama booda yookan akka barbaachisaa tahe itti ilaa fi ilaameen Uummatni Oromoo filmaata godhee mootummaa mataa isaa dhaabbata. Sana booda mootummaan kun uummata naannoo Oromiyaa jiran wajjin karaa nagaan akkaataa itti waliin jiraatu marii taasisuu danda’a. Mootummaa Uummataa waan taheef Uummatni Oromoo waan mootummaan kun murteesse fi dhugoomse fudhachuuf dirqama qaba.
Amma sana garuu humna qabna jennee sabaa fi sabi-lammii ollaa keenyaa jiran yoo saamne, yoo miine, yoo itti roorifne cubbuu guddaa nutti taha. Badiin akkasii abaaramuus qaba. Akka kan mataa keenya mirga isaanii fi haqa isaanii kabajuuf qabna. Nageenya isaanii eguu fi of danda’anii jiraatan gargaarsaa fi tajaajila barbaachisuu gochuufiin dirqama keenya taha. Isaan illee gaafa qophaan hiree isaanii abbaa barbaadan wajjin jiraachuuf yoo murteefatan kabajuufiin barbaachisa taha.
Yaaddon koo dhuma hin qabne kan maddu yaroo Moootummaan Itoophiyaa jiguu gahu akka gobocoor utaalanii keessa seenuuf wixxifatan bara baraan arguu irra madda. Haala kana fakkaatu bara dheeraaf ija koon raga bahaan jira. Warruma keleessa “WBOn hin jiru”,” Oduun WBO kijiba” jedhutu WBO kana maqaa gargaarsan gara barbaadanitti dhabsachuu yaalaa jiraachuu dhageenya. Haa tahu malee jidduu isaanii maaliifiin an filamuu dhabee jedhanii akka wal jeeqaa jiranis ni dhagama. Akkuma kana bara kana immoo QBOf diaspora keessatti namni itti gaafatamu danachaa jira. WBO fi QBO gargaarsa diaspora irra argatan Kaayyoo fi Akeeka dhaabatniif irraa kan isaan jalisu tahuu hin qabu. Gargaarsi goodhamu waanjoo garbummaa uummata Oromoo kan akkekatee fi jaalala Uummata Oromoof gummaachuu kan tahu qofa. Gargaarsi hidhaa (string) of duubaa qabu bal’aa of jala harkifatee akka dhufu beekamee WBO fi QBO gargaarsa argamu maraa kaayyoo fi akeeka isaanii utuu hin dabsiin (we will never ever compromise the principle of our liberation struggle) gargarsa karaa kamiin iyyuu argame fudhachuun rakkoo hin qabu.
Ijoolleen Oromoo biyya keessa jiran” yoo duune Haacaaluu itti”,” yoo hidhamne Jawwaar ittI”, “yaa badne Marroo Itti” dabalamna jedhanii dhaadatu jechuu dhaga’ee baayyeen gammade. Qabsoof sodaa akka hin qabne mirkaneessa.Gootota Oromoo hordofanii ittii dhaaddatan qabaachuun waan gudaa dha. Dhalootni Oromoo dhufaa darbiin akka gootummaan guutamanii gudatan qor-qalbii isaanii bareechee gargaara. Kanaafuu Mootummaan Yaroo Naannoo Oromiya milkiin akka xumuramu hawwii utuu hin taane abdii fi amantaa guutuun qaba.
Oromiyaan Ni bilissomti!
Previous articleLammaa fi Abiy eenyu ??
Next articleOduu Injifannoo WBO, Arrest of Wolaita Leaders
Olana Abbalichie August 9, 2020 At 11:08 am
Absolutely, Damee Boruu!
The sky is NOT going to be the limit if the great Oromo people understand their immense potential and power as well as the inferiority of their uncivilized backward enemies, and act in unison to achieve their inalienable freedom. The PP/ODP/OPDO cadres were selected for their inept stupidity and were trained to serve the TPLF as donkeys in Oromia, and of course, promoted themselves to becoming naftagna mules after their former masters melted away under qeerroo and qarree power (for the benefit of urban qeerroo and qarree, the dictionary definition of the term “mule” is defined as “an animal that is the offspring a mare and donkey, used for carrying loads). The analogy, “donkey ” – “mule” is used to show that the OPDO/ODP/PP cadres have never shown thinking abilities that can enable them to act independently apart from changing masters and carrying out orders to destroy the Oromo people. Since they have no consciences, they are not being haunted even when they falsely utter, “our masters are our people”, and go on to spilling the bloods of the Oromo people, who have shown excessive compassionate and gave them second chance. Our people could have been freed in 2018; never again that complacency be repeated.
Oromo, qeerroo and qarree: The neo-naftagna regime led by Abiy Ahmed must be decisively defeated and, the naftagna system, put in place to advance anti-Oromo policies, in the name of “Ethiopia” whilst working hard to destroy the Oromo as a nation, must be convincingly dismantled. Take serious inventory of the last 150 years and bring the unwarranted sufferings inflicted against you by the naftagna system to an end. You have already walked into your fear bubbles and witnessed the inflected power of your enemy popping in front of you. You must promote highly capable leaders, stay alert, listen to each other as usual and take your struggles for Oromo just cause to the finishing line. Your freedom and destiny as well as the future of your people is in your capable hands – qarree and qeerroo. Never go back to sleep until you cleanse the humiliations our people have suffered since the creation of Empire Ethiopia. Our efforts and toil to help build anti-Oromo empire in the 19th and 20th century must be substituted by complete commitments to our independence in the 21st century. “Business as usual” mustn’t be the norm in Ethiopia anymore; the naftagna mustn’t be allowed to destroy the great nation and carry on braying. Unhelpful modesty, mediocrity and hesitation must give way to focused commitments to liberation with unwavering determination. It can be done!
“No one can ride on the back of a man unless it bent”!